Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTonga » Ityala lokuqala le-COVID-19 lixelwe eTonga
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Iindaba zaseTonga • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Inkulumbuso yaseTonga uPohiva Tu'i'onetoa
Inkulumbuso yaseTonga uPohiva Tu'i'onetoa uthe urhulumente uceba ukwenza isibhengezo ngoMvulo malunga nokuba kuyakwenziwa na ukuvalwa kwelizwe.
Urhulumente waseTonga uzakubhengeza ngoMvulo ukuba isiqithi siza kufakwa phantsi kokuvalwa kwelizwe.
Kwakukho imeko enye ye-COVID-19 phakathi kwabakhweli abangama-215 abafike bevela kwisixeko saseChristchurch.
Malunga nama-31 ekhulwini abemi baseTonga bagonywe ngokupheleleyo yaye abangama-48 ekhulwini baye bafumana ubuncinane idosi enye.
Amagosa aseTonga abhengeza oko Tonga ayisekho i-coronavirus emva komkhweli osuka kwinqwelomoya Christchurch, iNew Zealand ivavanywe inentsholongwane ye-COVID-19.
Olu lusulelo lokuqala lwe-COVID-19 olurekhodiweyo kubukumkani basePolynesia ukusukela oko kwaqala ubhubhani we-coronavirus yehlabathi.
Kwintetho yanamhlanje kanomathotholo, iNkulumbuso yaseTonga uPohiva Tu'i'onetoa uqinisekisile ukuba kukho imeko enye ye-COVID-19 phakathi kwabakhweli abangama-215 abafike bevela kwisixeko saseChristchurch.
UTu'i'onetoa uthe urhulumente uceba ukwenza isibhengezo ngoMvulo malunga nokuba kuyakwenziwa na ukuvalwa kwelizwe.
Ngeli xesha, inkulumbuso yayalela bonke abantu baseTonga ukuba bahambe ngokuhamba ngokwasemzimbeni kwaye balandele imigaqo enxulumene ne-coronavirus.
Ngoku ka TongaUmphathi oyintloko wesebe lezempilo uSiale 'Akau'ola, abasebenzi bezempilo, amapolisa kunye nabo bonke abasebenzi abasebenza kwisikhululo seenqwelomoya saseFua'amotu xa inqwelomoya yaseChristchurch yafikayo babekwa bodwa. Wongeze ngelithi bonke abo basebenza kufutshane nenqwelomoya baye bagonywa.
Christchurch abakhweli ngenqwelomoya baquka abasebenzi bamaxesha athile kunye namalungu eqela leOlimpiki laseTonga.
Tonga ikumntla-mpuma weNew Zealand, yaye likhaya labantu abamalunga ne-106,000 XNUMX.
Malunga nama-31% amaTonga agonywe ngokupheleleyo kwaye ama-48% abenedosi enye ubuncinci, ngokweqela lophando i-Our World in Data.
Tonga uphakathi kwezizwe ezimbalwa eziseleyo emhlabeni eziye zanqanda ukuqhambuka kwe-COVID-19. Njengabamelwane bayo abaninzi, ukuba yedwa kweTonga kuye kwanceda ukuyigcina ikhuselekile kodwa ijongene nemiceli mngeni emikhulu ukuba intsholongwane ibambekile ngenxa yenkqubo yayo yezempilo engenazibonelelo.
Isizwe esikufuphi saseFiji sithintele ukuqhambuka okukhulu kude kube ngu-Epreli, xa ukwahluka kweDelta yekoronavirus yakrazula ikhonkco lesiqithi, yasulela abantu abangaphezu kwe-50,000 kwaye yabulala ubuncinci abangama-673.